ဝိညာဉ်လွှင့်နည်းများ - Update News
နည်းပညာပိုင်းတွေဘဲဆက်တိုက်တင်ဖြစ်နေတော့ပျင်းနေမှာဆိုးလို့ ပရလောကနဲပတ်သက်တာလေးတင်ပေးလိုက်တယ်စမ်းချင်တဲ့သူတွေလည်းစမ်းကြည့်လို့ရအောင်ပါဒီဝိညာဉ်လွှင့်ခြင်းဆိုတာကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဝိညာဉ်လွှင့်နိုင်မယ့်နည်းတွေကိုလည်း အားလုံးသိချင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။
ဝိညာဉ်လွှင့်ခြင်း ဆိုတာကတော့ အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်ခန္တာထဲကနေ soul (စိတ်ခန္တာ) ကိုထိန်းချုပ်ပြီး ခွဲထုတ်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝိညာဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ soul (စိတ်ခန္တာ) ဟာ spirit word ကြီးထဲကိုကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့ရောက်သွားမှာပါ။ အဲဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ရှိသလိုပျံနိုင်မယ်၊ သေဆုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့လည်း စကားပြောနိုင်မယ်၊ လူတွေကိုအိပ်မက်ပေးနိုင်တဲ့ထိ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝ ခံစားရမှာပါ။
ကျနော်တို့သာမန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ soul ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကနေထွက်သွားပြီး spirit world ထဲကိုရောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဝိညာဉ်လွှင့်ပြီးထွက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ soul ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ အဲခါမှာကိုယ်ရဲ့ soul ဟာ spirit world ထဲကကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့ ငမူးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ မနက်မိုးလင်းလို့အိပ်ရာကနိုးလာရင် spirit world ကိုရောက်ခဲ့တာတွေကအိပ်မက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ မှတ်မိတဲ့တချို့တလေမှတ်မိမမှတ်မိတာတွေလည်းရှိတဲ့ သာမန်အိပ်မက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညကလူနဲ့မတူအောင်မူးရူးလာတဲ့ငမူး မနက်နိုးလာတဲ့အခါညက အဖြစ်အပျက်တွေကို အားလုံးမမှတ်မိတော့သလိုမျိုးပေါ့
ကျနော်တို့အားလုံး ညဘက်အချိန်မတော်နိုးလာတဲ့အခါမှာ တွင်းနက်ကြီးထဲကိုအမြင့်ကြီးကပြုတ်ကျသွားသလိုခံစားကြဖူးမှာပါ။ အဲဒါဟာ spirit world ထဲရောက်နေတဲ့ soul ကရုတ်တရက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်ဆွဲသွင်းခြင်းခံရလို့ပါ တကယ်လို့ကျနော်တို့ဟာဝိညာဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ညအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာ spirit world ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ခန္တာကိုယ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရှိရာကိုစိတ်ရှိသလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျံသန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူတွေနဲ့လည်း spirit world မှာစကားပြောချင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ်စကားပြောမယ့်သူက ကိုယ့်လိုဘဲဝိညာဉ်လွှင့်ထားသူ မဟုတ်ရင်တော့ အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့ ငမူးနဲ့စကားပြောနေရသလိုပါဘဲ ကိုယ်ညက spirit world မှာ စကားပြောခဲ့တဲ့သူက မနက်နိုးလာရင်ညကကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့ အိပ်မက်မက်တယ်လို့သူပြောမှာပါ။ ကိုယ်ဘာပြောလဲဆိုတာတွေကိုတော့သူမေ့နေမှာပါ တကယ်လို့ spirit world မှာ ကိုယ့်လိုဘဲဝိညာဉ်လွှင့်သူတစ်ဦးဦးနဲ့ စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်လုံးက soul ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် အပြင်လောကမှာစကားပြောသလို စကားဝိုင်းကောင်းကောင်းတစ်ခုရမှာပါ။
Spirit world ထဲမှာဝိညာဉ်လွှင့်သူအချင်းချင်း ရည်းစားလည်းထားလို့ရပါတယ် ဘာညာကွိကွလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့ Soul ကို ထိန်းချုပ်မှုကိုယ်စီရှိကြတဲ့အတွကွတကယ့် reality အတိုင်းပါဘဲ။ အာ့တွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သေလွန်သွားတဲ့အဘိုးအဘွား အဖေအမေတွေအိပ်မက်ပေးတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးလား ? အဲဒါကသေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ soul တွေက spirit world ထဲမှာစကားလာပြောကြတာပါ။ တကယ်လို့ကိုယ်က ဝိညာဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ရင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကိုယ်တန်ဖိုးထားရသူ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ soul နဲ့ spirit world မှာပြန်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
ဝိညာဉ်လွှင့်ခြင်းကနေ နိုးထတော့မယ်ဆိုရင် soul ကိုထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ခန္တာကိုယ်ဆီပြန်သွားပြီးစိတ်လျှော့လှဲအိပ်ရုံပါဘဲ။ Spirity world ကြီးထဲမှာ ကိုယ်သွားလိုရာကိုသွားလို့ရတဲ့အတွက် ကိုယ်ခန္ဓာဆီကိုပြန်မတတ်မှာကိုတော့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး Spirit world မှာ အကြာကြီးမနေဖို့တော့ သတိပေးပါရစေ။
ဝိညာဉ်လွှင့်ဖို့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ အာ့တွေထဲမှာမှ နားလည်လွယ်မယ့်အန္တရာယ်ကင်းမယ့် ကျနော်တို့နဲ့အဆင်ပြေမယ့်နည်းတချို့ကို ကျနော်admin sam က ရှာထုတ်လာပေးပါတယ်။ တစ်နည်းအဆင်မပြေရင်နောက်တစ်နည်းစမ်းပါ
1. The Rope technique (စိတ်ကူးယဉ်ကြိုး နည်းလမ်း)
ဒီနည်းလမ်းဟာစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Robert Bruce တီထွင်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးထဲက နည်းလမ်းတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့ အဓိကသော့ချက်ကတော့ မျက်နှာကျက်ပေါ်ကတွဲလောင်းကျနေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကြိုးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကုတင်ပေါ်မှာ သက်တောင့်သက်သာ လှဲပြီး စိတ်ကိုဖြေလျှော့ထားပါ။ အပေါ်ကမျက်နှာကျက်ကိုကြည့်ပြီး ကြိုးတစ်ချောင်းရှိနေတယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ မြင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေက အဲဒီကြိုးကိုတွယ်တက်နေတယ်လိုစိတ်ကူးယဉ်ပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအမြင့်ရောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ပါ။ ခနကြာရင်ခေါင်းမူးသလိုလိုကိုယ်ထဲက တုန်ခါလာသလိုလိုခံစားလာရပါမယ်။ ဒါကတော့ soul က ခန္တာကိုယ်ထဲကထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့ ထွက်ခွာတော့မယ့်လက္ခဏာပါ။ စိတ်ကူးထဲမှာအပေါ်ကိုဆက်တက်နေပါ။ တအောင့်ကြာရင် soul ကခန္တာကိုယ်ထဲကနေ ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝနဲ့ထွက်ခွာနိုင်ပါပြီ။
2. The Monroe technique
ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင် Dr. Robert Monroe ကတီထွင်ခဲ့တာပါ။ အထိရောက်ဆုံးနည်းတွေထဲမှာပါပါတယ်။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ကုတင်ပေါ်မှာလှဲနေပြီး စိတ်ကိုဖြေလျှော့ထားပါ။ အိပ်ငိုက်လာတဲ့အချိန်ကျရင် အိပ်မပျော်အောင်ထိန်းထားပါ။ အိပ်ခြင်းနဲ့နိုးခြင်းကြားမှာထိန်းထားပါ။ မျက်လုံးမှိတ်ထားတဲ့ အခါမြင်ရတဲ့အမှောင်ထုကို ကြည့်နေရင်းဆက်ထိန်းထားပါ။ တအောင့်ကြာရင်ခေါင်းမူးလာသလိုလို ခန္တာကိုယ်ထဲကတုန်ခါသလိုလိုခံစားလာရပါမယ်။ အဲအချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရုပ်ခန္တာထဲကနေ soul ကိုခွဲထုတ်လို့ရပါပြီ။
3. Muldoons Thirst technique
ဒီနည်းလမ်းကတော့ Sylvan Muldoon တီထွင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နဲနဲဒုက္ခခံရပေမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမယ့်သူဟာ မနက်အိပ်ယာကထလို့ရေတစ်ခွက်သောက်ပြီးတည်းက တစ်နေ့လုံးရေမသောက်ရပါဘူး။ ဆာလောင်မှုကိုအသုံးချပြီးဝိညာဉ်လွှင့်မယ့်နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံးရေမသောက်ထားဘဲညရောက်လာတဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်းကိုစပါမယ်။ ကိုယ့်အိပ်ယာနဲ့ခပ်ခွာခွာနေရာမှာ ရေထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကိုချထားပါ။
မအိပ်ခင်ဆားအနည်းငယ်စားပြီးမှအိပ်ယာဝင်ပါ။ ကိုယ့်အခန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ မျက်စိမှိတ်ထားလည်းအလွတ်ရပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကုတင်ပေါ်တက်ပြီးမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ပါ။ ခုနကရေခွက်တင်ထားခဲ့တဲ့နေရာကို စိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ soul က ရေခွက်ကိုသွားယူနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှတ်ပါ။ ဆက်တိုက်မှတ်နေပါ။ ခနကြာရင်တော့ခေါင်းတွေမူးလာပြီး ကိုယ်တွေတုန်ခါသလိုခံစားလာရပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့င်ဟာ လေပေါ်မျောနေသလို ခံစားမှုမျိုးကိုခံစားလာပါမယ်။ Soul ထြက္သြားပါၿပီ။
တစ်နည်းမရရင် နောက်တစ်နည်း စမ်းကြည့်ကြပါ။ ဒီ ၃ နည်းထဲက တနည်းနည်းနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ကံကောင်းကြပါစေ
Credit Nay Myo Thu Ya
Previous Article အရက်လာဝယ်သောက်တဲ့ ဝိညာဉ်
Next Article ပရလောကတတကယ်ရှိြကောင်း လက်ခံခဲ့ရတဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ် ညတစ်ည
ဗြိတိန်မှာ ကိုဗစ် မျိုးကွဲအသစ်ကို ရင်ဆိုင် လာရတဲ့ အတွက် အတင်းကြပ်ဆုံး လော့ဒေါင်း ချတော့မည်
လူတွေ ထင်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ တခုပြီးတခု ဆက်တိုက်လာမယ်တဲ့